ara catz ...
ajụjụ ara catz ...
2 afọ 3 ọnwa gara aga #203 by PAYSON
Ọ dị onye ọzọ nwere ileta ara catz / saitek oge re-ibudata panel ọkwọ ụgbọala na plugins? M na-ahụ n'agbanyeghị na ọ bụ otu okwu nke "asị ee niile" ihe, ihe ịrụ ọrụ ezigbo esonụ a nleta n'ebe ahụ. M eleghị anya, ga-dị nnọọ na-SPAD ma m na-anụ na ọ nwere ya onwe obere quirks.
2 afọ 3 ọnwa gara aga #204 by Gh0stRider203
M na mgbe na-, n'eziokwu.
M na-eji nwere Saitek x45 ma My ikpeazụ busted on Me>.> A Bidding na a x55 on ebay ma ọkọdọ majorly outbid
2 afọ 3 ọnwa gara aga #209 by kolijahc
Olee otú gị x45 agbaji? Dị nnọọ ọchịchọ ịmata, m ite wee pụọ. Ọ bụ ọkacha mmasị m helikọpta osisi mgbe m were isi-iyi si. M nụrụ na ọ bụ ike ime ka ha dịghachi na a anwansi ịgba, m zụtara ya ma nwere ma na-agbalị. Ka m nọ na-eche na mba mbupu, m malitere trolling ebay nakwa. Ezigbo Kra osisi i nwere ike ịhụ (fighterstick eriri) maka dị ka $ 40USD, na pro pedal eriri for $ 60USD. All m mkpa bụ trotul na m ga-enwe obi ụtọ.
M nwere jisie na x55 na x56 on ebay. Nke ọ bụla ọ overpriced, ma ọ bụ a Come ndepụta (naanị osisi na bụghị trotul nke nwere niile circuitry ma ọ bụ Anglịkan) ma ọ bụ untested (onye na-adịghị nwere a eriri ọdụ ụgbọ mmiri na 30 sekọnd?)
A ọtụtụ ndị hụrụ n'anya na-asị ha, ma onye nke kasị mma amụọ na ahụwo m bụ thrustmaster HOTAS X ($ 20USD), ma anya n'ihi na-acha anụnụ anụnụ otu nke bụ HOTAS 4 ($ 30USD). M na-eme ka di na nwunye ngwa Mods (akuakuzinwo a di na nwunye oghere maka a paracord handle, na ebipụ Flange gburugburu spring ukpụhọde isi na-eme ka mmiri mbughari mgbe mmezi nke helicopters) na-enye ha ka ha lawa ka enyi m na chọrọ ịmụta helicopters. na-eme ka a magburu onwe laptọọpụ osisi ozugbo ị nwere ike na-ebu m achọ ịma ihe na-adị mfe.
2 afọ 3 ọnwa gara aga #215 by PAYSON
Hi KC, dịghị mgbe m nwere ihe X-45, m na-eche ozi mere a crossover. All m na mgbe ekesịpde bụ Saitek si X-55 HOTAS akara usoro. Ha ga-abụ dịtụ "paired". Ọ bụrụ na m chọrọ nnọọ a mkpisi ụfọdụ mkpọchi na m ga-aga azụ m Logitech Supreme, nke bụ ihe niile ị chọrọ ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọelu ụgbọelu. Ọ bụrụ na ị (dị ka m na) na-eme ọ bụla ọgụ megide ụfọdụ dị oké njọ Ai, mgbe ahụ, X-55 (ma ọ bụ 65) "akara usoro" bụ na-ekpo ọkụ HOTAS tiketi.
2 afọ 3 ọnwa gara aga #217 by Gh0stRider203
mbụ anya, wepụrụ gị oyiri post akpa ọchị m n'aka na ọ bụ kpachaara anya otú ọ dịghị laps gburugburu ubi akpa ọchị
amaghị m ihe niile wee na-na osisi ma AMA m na trotul akụkụ busted mgbe m furu efu MY itule na My n'aka gbadata na ahụ, snapping ya.
Crappy imewe a trotul, ma ọ bụrụ na ị na-ajụ Me ... m jisiri ka wuru Ndozi iji ụfọdụ ọgwụ teepu ma ọma ị maara na nke ahụ agaghị na-etinyecha adịru mgbe ebighị ebi.
Enweghị osisi Otú ọ dị, ndị trotul abaghị uru. Otu sec m na-eji osisi, na-esote m ịtụtụrụ ya na skwọsh a ahụhụ (otu ihe m kpọrọ asị ka ọtụtụ banyere My ulo bụ m achọ ịma ọchịcha. I na-na na na-akpọ obodo ma nke ahụ na-n'ụzọ doro anya mere adịghị mma otú ahụ ka m na-eche My ỌZỌ oku bụ na County Health Dept)., m guzo ya azụ ala na ya ịkwụsị ọrụ. M nnọọ ka wtf? n'ezie?
2 afọ 3 ọnwa gara aga #218 by Gh0stRider203
PAYSON dere, sị: Hi KC, dịghị mgbe m nwere ihe X-45, m na-eche ozi mere a crossover. All m na mgbe ekesịpde bụ Saitek si X-55 HOTAS akara usoro. Ha ga-abụ dịtụ "paired". Ọ bụrụ na m chọrọ nnọọ a mkpisi ụfọdụ mkpọchi na m ga-aga azụ m Logitech Supreme, nke bụ ihe niile ị chọrọ ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọelu ụgbọelu. Ọ bụrụ na ị (dị ka m na) na-eme ọ bụla ọgụ megide ụfọdụ dị oké njọ Ai, mgbe ahụ, X-55 (ma ọ bụ 65) "akara usoro" bụ na-ekpo ọkụ HOTAS tiketi.
ya-ahụ m na-adịghị eme a otutu nke ikuku ikuku ọgụ, ma m hụrụ n'anya niile na ọrụ na 55 dị ka mgbe m KA ukwuu n'ime ofufe jumbos ... m mara mma nke ukwuu nwetara a na ojiji maka ọ bụla otu button akpa ọchị
Ebe ọ bụ na m na-eme ihe ILS abịakwute ụbọchị ndị a (m na-asị ILS ugbu a, m hụrụ ya n'anya akpa ọchị), m agbasaghị nwere otu di na nwunye na ntọlite ​​maka autopilot ka ịgbanwee si GPS ka NAV1 na site NAV Bịakwute. M na-eche banyere naanị ihe m n'ezie na-eji keyboard maka mgbe m nwere 45 bụ ịgwa ATC, gbanye / anya na APU, na eleghị anya na 1 ma ọ bụ 2 obere ihe akpa ọchị
2 afọ 3 ọnwa gara aga #221 by PAYSON
Ọ DỊ MMA ! M ga-anọ na-ezighị ezi forum. Ọtụtụ mgbaghara .gtg
Oge ike page: 0.282 sekọnd